Location: Mbido » Ịdee » Ozi waya » Mmetụta Ultrasound ọhụrụ bụ ọgwụgwọ dị irè maka Alzheimer
Site na mmụba nke nkezi ndụ ndụ n'ọtụtụ akụkụ nke ụwa, ọrịa ụfọdụ ndị metụtara afọ aghọwo ihe a na-ahụkarị. Ọrịa Alzheimer (AD), n'ụzọ dị mwute, bụ otu n'ime ha, na-agbasa nke ukwuu n'ime ọha mmadụ merela agadi na Japan, Korea, na mba Europe dị iche iche. Ugbu a enweghi ọgwụgwọ ma ọ bụ atụmatụ dị irè iji belata ọganihu nke AD. N'ihi ya, ọ na-ebute oke nhụjuanya nye ndị ọrịa, ezinụlọ, na ndị nlekọta yana nnukwu ibu arọ.
Ọ dabara nke ọma, nnyocha otu ndị ọkà mmụta sayensị mere n'oge na-adịbeghị anya na Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) na Korea egosila na a pụrụ inwe ụzọ a ga-esi lụsoo AD ọgụ site n'iji "ụtụ gamma nke dabeere na ultrasound," usoro nke gụnyere ịmekọrịta mmekọrịta. elu ụbụrụ mmadụ (ma ọ bụ anụmanụ) ebili mmiri n'elu 30 Hz (a na-akpọ "gamma ebili mmiri") na mpụta oscillation nke a nyere ugboro. Usoro a na-eme n'ụzọ nkịtị site n'ikpughe isiokwu na mkpali ugboro ugboro, dị ka ụda, ọkụ, ma ọ bụ nrụgharị igwe.
Nnyocha ndị gara aga banyere ụmụ oke egosila na ntinye gamma nwere ike ịlụ ọgụ megide nhazi nke β-amyloid plaques na protein protein tau - akara ọkọlọtọ nke mmalite AD. N'akwụkwọ akụkọ a na nso nso a, nke e bipụtara na Translational Neurodegeneration, ndị otu GIST gosipụtara na ọ ga-ekwe omume ịghọta nhụsianya gamma site n'itinye pulses ultrasound na 40 Hz, ya bụ, na band gamma, n'ime ụbụrụ nke ụdị AD-model.
Otu n'ime uru kacha mma nke usoro a bụ n'ụzọ e si elekọta ya. Otu Prọfesọ Jae Gwan Kim, bụ́ onye duziri ọmụmụ ihe ahụ n’akụkụ onye enyemaka Prọfesọ Tae Kim, na-akọwa, sị: “Tụnyere usoro ịgba ume gamma ndị ọzọ na-adabere n’ụda ma ọ bụ ọkụ na-egbuke egbuke, ultrasound pụrụ iru n’ụbụrụ n’enweghị nsogbu n’emebighị usoro mmetụta uche anyị. Nke a na-eme ka usoro nyocha nke ultrasound dịkwuo mma maka ndị ọrịa.
Dị ka nnwale ha gosiri, ụmụ oke ndị a na-ahụ anya n'ụbụrụ ultrasound awa abụọ kwa ụbọchị maka izu abụọ ebelatala mkpokọta β-amyloid plaque na ọkwa protein tau n'ụbụrụ ha. Ọzọkwa, nyocha electroencephalographic nke ụmụ oke ndị a kpughekwara mmezi arụ ọrụ, na-atụ aro na njikọta ụbụrụ na-eritekwa uru na ọgwụgwọ a. Ọzọkwa, usoro ahụ emeghị ka ụdị microbleeding ọ bụla (ọbara ọgbụgba ụbụrụ), na-egosi na ọ naghị emerụ ahụ anụ ahụ ụbụrụ.
N'ozuzu, nsonaazụ na-ekwe nkwa nke ọmụmụ a nwere ike imeghe ụzọ maka usoro ọgwụgwọ ọhụrụ, nke na-adịghị emerụ ahụ maka AD na-enweghị mmetụta, yana inye aka na-emeso ọnọdụ ndị ọzọ na-abụghị AD. Dr. Tae Kim kwuru, sị: "Ọ bụ ezie na ụzọ anyị nwere ike ime ka ndụ ndị ọrịa dịkwuo mma site n'ibelata ọganihu AD, ọ pụkwara inye ọgwụgwọ ọhụrụ maka ọrịa ndị ọzọ na-akpata neurodegenerative, dị ka ọrịa Parkinson."
Ka anyị nwee olile anya na ọmụmụ ihe ga-eme n'ọdịnihu ga-eme ka mgbatị gamma dabere na ultrasound dị ka nhọrọ ọgwụgwọ dị irè, ma na-enye ndị ọrịa AD na ezinụlọ ha enyemaka dị mkpa nke ukwuu.
Ọrịa Alzheimer Korea Science Technology
Ezumike okpomọkụ, ihe omume ezumike, na ihe ize ndụ...